Ezona Purses zibiza kakhulu kwihlabathi - Umyili Izikhwama
Ezona Purses zibiza kakhulu kwihlabathi
Iipaji ezibiza kakhulu kunye nezesitayile sehlabathi zenziwe ngezinto ezingaqhelekanga okanye ezintle. Ngamnye umntu owenziwe ngesandla yingcibi enezakhono ezihoya iinkcukacha, eziipaji ziba ziindlalifa.
Ngo-2014 iHimalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30
UKUYA Ngo-2014, iHimalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30 Ibonisa izixhobo ezenziwe ngegolide emhlophe eyi-18K, izixhobo zedayimani ezifakiweyo zathengiswa ngo-2017 nguChristie waseHong Kong. Ubunzima be carat iyonke ye-VVS yokucacisa izixhobo zedayimane yayiyi-10.23. Ingxowa ikwanayo neclochette, ibhegi encinci yothuli, isitshixo kunye nezitshixo, enye ingxowa yothuli, iibhokisi ezi-2 (1 encinci), kunye nengxowa yesikhumba.
I-25 yeeNdawo eziNinzi zeXabiso leMveliso
Abadali beengxowa zesandla abadumileyo
Ixabisa malini iVuitton Purse? Isikhokelo esilula
Uninzi lwebhegi enqwenelekayo ekhoyo
Le bhegi yesandla ithengiswe nge-HK $ 2,940,000. UChristie usete irekhodi lehlabathi eHong Kong ngeyona ngxowa ibiza kakhulu eyakha yathengiswa kwifandesi nge- £ 293,000. Malunga ne- $ 380,000 USD. UChristie ubize i-Himalaya Diamond handbag njengeyona 'bhegi inqwenelekayo ekhoyo'! Kunyaka ophelileyo ngo-2016, ngomhla wama-30 kaChristiethisikhumbuzo, uChristie waseHong Kong wathengisa ibhegi yeHimalaya Birkin Diamond nge $ 300,168 USD.
2. I-2019 ye-White Himalaya Niloticus Crocodile ibuyile uKelly 25
IHermès ngumvelisi waseFrance wokunethezeka kwefashoni ephezulu kwaye yinto engazange ibonwe kwihlabathi lonke phakathi kwabaqokeleli xa yazisa uthotho lweHermès Himalaya Birkin. I-Kelly ithathwa ngabaqokeleli emiselwe ukuba yindlalifa. Rare 2019, Matte White Himalaya Niloticus Crocodile ibuyile Kelly 25 Ngezixhobo ze-palladium ezithengiswe nge-HK $ 1,875,000 eChristie eHong Kong. Imalunga ne- $ 241,000 USD.
3. 2018 I-White Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 25
UKUYA I-2018 Hermès, Rare, Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 25 Ibonisa izixhobo ze-palladium ezithengiswa ngo-2019 eChristie eHong Kong. Uthotho lwe-Himalaya Birkin luphakathi kwezona purse zibiza kakhulu zithengisiwe! Abaqokeleli abanomdla bayabhida ngezi zikhwama zixabisekileyo zibonisa ubuchule obungenasiphako kunye nobugcisa obunqabileyo kunye nezakhono. Le ngxowa ithengiswe nge-HK $ 1,625,000 elingana ne- $ 208,000 yeedola.
4. IHimalaya Birkin Crocodile Matte 30
Iimpawu zeMowudiSens a I-Hermès Himalaya Birkin Crocodile Matte engaphambi komnini . Iingxowa zeHermès Birkin zikumgangatho ophezulu kangangokuba zinokulungiswa ebomini kwaye zidluliselwe njengelifa. Ngoku ka Ithamsanqa , Iipaji zeBirkin zikwajongwa njengezinto zotyalo mali kuba zihlala zizisa ngaphezulu kwexabiso labo lokuqala kwintengiso yesibini. Ebizwa emva komdlali weqonga kunye nemvumi uJane Birkin, ibhegi nganye yesikhumba yenziwe ngesandla ngabachweli abaqeqeshiweyo. Ukuba ujonga isipaji seBirkin, eyona ndawo yakho ibalaseleyo kukundlu yefandesi. Le ngxowa-mali iboniswe ngokudibanisa okumhlophe nomdaka kwaye ithengisa nge-199,999 yeedola.
yimalini ukufumana iikati zibhengezwe
5. IHermès Rare, Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 25
Ebizwa ngokuba ziiHimalaya kunye neencopho zazo ezintle zekhephu, I-2019, Rare, Matte White Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30 ifaka umbala obonisa ezi ntaba zinomtsalane. Ihonjiswe ngesixhobo esithandekayo se-palladium, le bhegi yenziwa njengomsebenzi onxibekayo wobugcisa!
Umsebenzi wobugcisa ulingana ngexabiso eliphezulu
Inkqubo yokudaya yabasebenzi ukufezekisa umbala ngokuthe ngcembe kwisikhumba sengwenya ixhomekeke kubuchule bezandla. Umbala otshayayo ongwevu uvela kwimiphetho engaphandle ngokuthe ngcembe uguqula ube yiperile emhlophe embindini wengxowa. Imitya, izibambo kunye neepaneli ezisecaleni ziphinda kakuhle lo mlinganiso ungwevu umhlophe. Ngo-2019, uChristie waseLondon wathengisa enye yezi zikhwama malunga ne- $ 162,000 USD (£ 125,000).
6. I-Luminosity American Alligator ibhegi
I-Coomi Luminosity American Alligator Isipaji Isipaji sokubamba esenziwe kwi-alligator yaseMelika kwaye sagqitywa kwisikhumba selungelo elilodwa lomenzi. Isiphatho sehafu-yehafu senziwe ngegolide engama-20k kwaye yenziwe ukuze ukwazi ukutyibilika kuyo ubambe iklatshi. Itotali yeedayimani zeedayimani eziyi-8.19 kunye izilayi uhombise isiphatho secuff-cuff.
Uyilo lweCoomi Bhasin
UCoomi Bhasin waziwa ngemifanekiso yakhe eqingqiweyo, kunye noyilo lobucwebe. Kwi-2017, wasungula iibhegi ezimbalwa ezizodwa kunye nesitayile njengenxalenye yengqokelela yakhe yasentwasahlobo. Uyilo lweebhegi zakhe zafumana amawonga. Le ngxowa inesingxobo esingaphakathi kunye nokuvalwa kwemagnethi kunye nelogo yegolide yeCoomi kwaye ithengisa malunga ne- $ 80,000.
yintoni esiyibhiyozela ngemini yesikhumbuzo
7. Umqolo Margaux 15 Alligator Top-Handle Bag
Umqolo Margaux 15 Alligator isikhwama sokuphatha phezulu ibonakalisiwe kwiMowudiSens kwaye iyafumaneka kumbala wesali. Yaziswa ngo-2018, iRow Margaux 15 Alligator ibonisa isiphatho esingaphezulu somqolo esenziwe nge alligator eyiyo. Izibambo ezingaphezulu ziqengqiwe, kwaye umphezulu ovulekileyo unokuvalwa kwebuckle. Ngaphandle ufumana iibhaksi ezisecaleni ezinokuhlengahlengiswa. Ngaphakathi engxoweni inombala we-suede. Isipaji sikwaqhayisa ngeepokotho ezimbini zesiliphu, kunye ne-zip zip. Emazantsi ikhuselwe ziinyawo.
IiAccolades kunye neMbasa yeRow
Umqolo wasungulwa ngo-2006 ngoodade u-Ashley Olsen kunye noMary-Kate Olsen. Ukusukela ngoko, oodade balwandisile uphawu lwabo ukuze babonise iibhegi, izambatho zamehlo kunye nokulungela ukunxiba. Ngo-2012, iBhunga labaFaki beMfashini yaseMelika labiza oodade njengabayili abaphambili babafazi base-US Le bhegi ithengiswa kwiModeSens nge- $ 65,000.
8. IHermès Matte Sanguine Alligator iBirkin Bag iBold Orange
Olunye uphawu olwahlukileyo lweMatte Sanguine Alligator Birkin Bag yi-hue eqaqambileyo, enesibindi e-orenji, eyenza ukuba ilungele ukusetyenziswa unyaka wonke. Iingxowa zeBirkin zikumgangatho ophezulu kangangokuba zinokulungiswa kubomi bonke kwaye zigqithiswe njengelifa. Izikhumba ezingaqhelekanga, ezinje ngesikhumba se-alligator seHermès Sanguine Alligator Birkin, zixabisa kakhulu. Ukuba ubukhangela ibhegi yezirhubuluzi zakudala, i IHermes Matte Sanguine Alligator iBirkin Bag ngezixhobo zegolide ezifumaneka eLady Hermèzz nge $ 61,000.
9. I-Gucci yabasetyhini i-Red Sylvie Crocodile Top Handle Bag
Inkqubo ye- Ingxowa yeGucci yabasetyhini e-Red Sylvie Crocodile ephezulu yenziwe e-Itali. UGucci uyinkokeli kuphawu lobunewunewu base-Italiya lwefashoni kunye nempahla yesikhumba. Uphawu lwentengiso lwase-Italiya, iGucci yeyona nto uyithandayo kubathengi yexesha elide, ineziphatho eziphezulu, kodwa eyona nto ibalulekileyo kuyilo lwewebhu yenayiloni kunye nebomvu ebomvu ebekwe ngaphakathi kwinqanaba lengxowa. I-nylon ihonjiswe ngoyilo lwegolide lwe-latch eyakhiwe ngesimbo esidityaniswe negolide. I-logo yeGucci ibonakala ngokulula kuyilo lwebhakethi. Le bhegi ithengisa nge-34,000 yeedola.
I-hibiscus ebomvu yengwenya efihliweyo ine-sheen ethambileyo.
Ingxowa ye-zip yangaphakathi kunye nepokotho ye-smartphone zifunyenwe kakhulu.
Izibambo eziphezulu zine-5 'drop.
Umtya onxibayo wegxalaba une-16.5 'yokuhla
Elona lizwe libiza kakhulu liSukela ukujikeleza
Iipaji ezibiza kakhulu kwihlabathi liphela ngumgangatho obalaseleyo kwaye zenziwe ngesandla ngamagcisa anobuchule. Kuphela zizinto ezigqwesileyo ezisetyenzisiweyo kunye ne-alligator, kwaye ingwenya ifihla into oyithandayo. Ezi bhegi zingaphezulu kwezinto zodidi, zinokuba yindlela yokutyala imali yakho.
Igadi Tools Ukuthandana Izixhobo Iziqinisekiso Umfanekiso Ukuhlela Isinxibo Sangaphandle
ubude kangakanani ukungena kwimilo
ubusuku bokuthandana ekhaya kuye
ukuba uyekile ungafumana umsebenzi
zithini iimpawu zokufa kwenja yakho
ingaba inja ingaba njani neenjana
wenzeni ngeebhamburger eseleyo